Famantarana 11 manana fanahiana amin'ny fifandraisana + Fomba 5 handresena azy - Fifandraisana
Famantarana 11 manana fanahiana amin'ny fifandraisana + Fomba 5 handresena azy
Heveriko fa tsy misy olombelona manintona ny mpiara-belona afaka milaza fa mbola tsy nahatsapa fanahiana tamin'ny fifandraisana izy ireo, fa ny tebiteby eo amin'ny fifandraisana dia mitondra zavatra any amin'ny sehatra hafa.
Inona izany, marina?
Vokatra mivantana amin'ny fahatsapana tsy fahatokisan-tena amin'ny fiarahanareo io. Miahiahy momba ny karazan-javatra rehetra mety hisy fiatraikany ratsy na hampiato ny fifandraisanareo ianareo.
Raha nanana traikefa ratsy ianao taloha, dia hianatra hamaly azy ireo amin'ny fomba iray ny atidohanao ary manantena ny hamerenan'ny lamina azy.
Azonao atao ny miaina amin'ny haavon'ny fitaintainanana misy eo amin'ny fiarahanareo, na zavatra kely, toa tsy dia misy dikany dia mety hanetsika azy. Misalasala ny tenanao ianao ary miahiahy ny fihetseham-pon'ny vadinao aminao.
Raha mieritreritra ianao fa mety hiteraka ahiahy amin'ny fifandraisana ny zavatra iainanao, ireo famantarana ireo dia tokony hanampy anao hamantatra raha tena olana aminao tokoa izany.
1. Mino Ianao fa Akaiky ny Farany
Na manao ahoana na manao ahoana ny fizotry ny fifandraisanareo, tsy azonao atao ny manova ny fahatsapana manjavozavo fa handeha kely kely izao 'Titanic' ary mikapoka vongan-dranomandry alohan'ny hilentika miaraka aminao ao anaty sambo.
Na dia ny tsy fitovian-kevitra tsy misy dikany indrindra eo aminao sy ny olon-tianao aza dia mangovitra ny vavoninao noho ny tahotra fa ny fahafahanao hanana olona sambatra mandrakizay dia nanaikitra tsara ny vovoka.
2. Mialona ianao
Ny fialonana dia fihetsem-po fatra mahazatra, saingy tsy misy fifandraisana mety ho tafavoaka raha miala amin'ny tanana.
Ny fanehoana famantarana ny fialonana dia tsy midika akory fa hanova ny fihetsiky ny olon-tianao, ary mety hanosika azy ireo hiala izany. Fa raha misy zavatra azo antoka, dia ny tena hampahory anao.
inona no nitranga tamin'i chris benoit
Raha efa nivadika taloha, tsy mahagaga izany saro-piaro ianao , fa tena hahatonga anao hitebiteby izany.
3. Mifehy ianao
Ny fanahianao dia midika fa maniry mafy hifehy ny fifandraisanao ianao mba hampijanonana anao tsy haratra. Mahatsapa ianao fa raha mahazaka izay tena mitranga dia ho tsara ny zava-drehetra.
4. Mahazaka loatra ianao
Mety tsy mifanaraka amin'ny laoniny izany, fa ny fomba iray hifehezana ny zavatra dia amin'ny fandehanana hatrany amin'ny kilometatra fanampiny mba hampifaly ny mpiara-miasa aminao ary ho olona hitanao fa tian'izy ireo hahatongavanao.
Amin'izay dia tsy afaka manana antony lehibe handoavana ny vola izy ireo ao amin'ny fiarahana. Rehefa dinihina tokoa, azony ny zavatra tadiaviny isaky ny avy, ka inona no tokony hitarainana?
5. Tsy te handray andraikitra ianao
Ity iray ity dia momba ny fiarovana ny tena ihany. Na dia toa tsy mitombina daholo aza izany dia mety tsy te-hidina amin'ny rindrina fiarovana ianao ary hanao dingana mankany amin'ny fifandraisana matotra kokoa.
Mety hitranga izany satria matahotra ianao fa hifarana ny fiarahana ary tsy te-hamelatra tena ho maratra ianao.
Angamba may ianao rehefa manolo-tena amin'ny olona iray taloha, ary io no mamelona ny fanahianao ankehitriny.
6. Mampametra-panontaniana ny amin'ny fifanarahanareo ianareo
Mifandray akaiky amin'ny fanoloran-tenanao ho phobia dia manandrana mitady antony mahatonga anao sy ny vadinao ho tsotra tsy mifanaraka .
Indraindray, ny zavatra hitanao dia kely dia kely ka mora resena izy ireo, saingy tsy hitanao izany. Mahita azy ireo ianao ho toy ny vanja milevina miandry fotsiny ny hanitsahana azy.
(Mazava ho azy, ny fanahianao dia mety hiorina amin'ny tsy fitoviana marina izay mety hanaporofo fa lehibe loatra ka tsy hampifanaraka toy ny finoana manodidina ny fanambadiana na ny zanaka na ny toerana tianao hipetrahana amin'ny fotoana maharitra. miresaka indrindra ity lahatsoratra ity.)
7. Tezitra ianao
Eo an-dàlana tsy tapaka ianao, midika izany fa mora aminao ny tsy mahafehy tena rehefa misy zavatra mitranga izay tena mitarika ny fanahianao. Manantena zavatra tsy mety foana ianao, ka rehefa izany dia sarotra ny tsy hipoaka.
Satria tsy matoky tena amin'ny fifandraisana ianao, na izany aza, aorian'ny tsy fahaizanao mitebiteby dia mety miahiahy ianao sao hanova ny fahatsapan'izy ireo anao ny fipoahana.
8. Mametraka fanontaniana be dia be ianao
Tsy faly velively ianao hanaiky fanazavana. Mametraka fanontaniana isaky ny fanontaniana ianao ary mamakafaka ireo valiny, mamadika ny teniny ao an-dohanao mba hanandrana hahita dikanteny miafina ao anatiny.
9. Tsy dia tianao loatra ny firaisana
Ny fanahianao momba ny fifandraisana dia manasarotra anao miala sasatra ao an-trano fatorianao. Raha vehivavy ianao dia miady mafy hahatratra ny fahafaham-po ara-nofo matetika (raha toa ka izany), ary raha lehilahy ianao dia mety ho sahirana hanao fampisehoana voalohany.
Mety hihena ny filanao ara-nofo noho ireo fahadisoam-panantenan'ny efitra fatorianao sy ireo fifandraisana akaiky eo amin'ny fifandraisanareo mety hijaly vokatr'izany.
10. Tonga manerana ny hatsiaka ianao
Ny tebitebin'ny fifandraisanao dia mety hidika fa mieritreritra ny sakaizanao fa mangatsiaka ianao, tsy mahatsiaro tena na lavitra. Miaro tena ianao, ary tsy te-haneho triatra amin'ny fiadianao raha sanatria ka tafiditra ao anatiny izy ireo, avy eo mandratra anao.
11. Sa Clingy loatra ianao
Etsy ankilany, ny fanahiana eo amin'ny fifandraisanao dia mety hidika fa handeha amin'ny lalana hafa ianao. Mety mila tsy tapaka ianao fitiavana ara-batana sy am-bava ary manome toky fa mbola tia anao izy ireo, ary tsy niova hevitra hatramin'ny farany nilazany izany 5 minitra lasa izay.
Mandresy ny fanahiana eo amin'ny fifandraisanao
Ny tebiteby eo amin'ny fifandraisana dia zavatra mahatsiravina hiainana. Midika izany fa tsy afaka mankafy ny majika amin'ny fitiavana ianao, noho izany dia manahy ianao sao ho faly ny vadinao miala amin'izany .
Mampihomehy, ny angovo ratsy rehetra atahoranao mampiahiahy ny amin'ny fifandraisanao dia mety ho ny antony mahatonga ny olon-tianao hiafara amin'ny famaranana azy.
Soa ihany, misy be dia be azonao atao mba hampitony ny eritreritrao ary hanomboka hanitsy ny fomba fisainanao mba hahafahanao mankafy ny fifandraisanao fa tsy miaina ao anaty tebiteby tsy tapaka.
Ireto misy fomba tsotra hanampiana anao handresy ny fanahiana eo amin'ny fifandraisana.
Mitadiava fanampiana avy amin'ny matihanina.
Ny firesahana ny eritreritrao sy ny fihetseham-ponao dia manampy olona maro hiatrika azy ireo ary, amin'ny anao, ampitony ny tafio-drivotra izay ao an-tsainao.
Azonao atao ny miresaka amin'ny vadinao (raha hiresaka tsy ho ela isika), fa angamba tsy mahazo aina ianao amin'izany. Mety ho mora aminao kokoa ny miresaka amin'ny olona tsy mizaha tavan'olona tanteraka ary efa zatra manampy ny olona toa anao amin'ny olana sedrain'izy ireo.
Safidy tsara ho an'ny maro ho toy ny teboka fanombohana dia ny torohevitra momba ny fifandraisana amin'ny Internet. Rehefa mifandray amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana izy ireo dia hanana sofina be fiahiana miandry anao hihaino anao, ary raha vao henony ny ahiahinao, dia ho afaka hanome torolàlana namboarina izy ireo hanampy anao hitantana an'io fanahiana io ary hampihena azy io amin'ny zavatra iray. tsy misy fiatraikany loatra amin'ny fiainanao izany.
Raha te-hijery bebe kokoa an'ity safidy ity ianao, hiresaka amin'olona izao.
1. Tadidio fa handeha tsara daholo.
Rehefa eo afovoan'ny fiarahana misara-bazana ianao dia mety hahatsapa ho toy ny faran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ireo hormonina rehetra mirohondrohona ireo dia mety ho sarotra be ny mitazona ny fomba fijery sy mahita ny hazavana any amin'ny faran'ny tionelina.
Tsotra toy ny fahatsiarovana an'izay, na inona na inona mitranga, dia hilamina daholo. Mieritrereta indray. Mety efa nahatsapa aretim-po ianao taloha, ary nandia azy tsara fotsiny ianao.
Salama tsara ianao talohan'ny nihaonanao tamin'ny namanao, ary, na mafy aza izany dia hitohy ny fiainana aorian'izy ireo raha toa ka mandeha any atsimo ny zavatra.
Tsy hifarana ny fiainanao raha mifarana ny fifandraisanao, ary ny fifandraisana dia tsy ny rehetra sy ny fiafaran'izy rehetra. Ny fifandraisana dia mety ho zavatra mahafinaritra, fa tsy mamaritra anao velively.
Raha misy olona tsy te-hiaraka aminao dia tsy misy azonao atao amin'izany. Mendrika ny olona iray ianao izay hamindra ny lanitra sy ny tany hiaraka aminao.
Rehefa manomboka miakatra ny tahotra dia mibitsibitsika fotsiny amin'ny tenanao fa hilamina ny zava-drehetra. Raha teneninao amin'ny tenanao dia ampy, na ho ela na ho haingana dia hanomboka hino azy marina ianao.
Arakaraka ny tsy hatahoranao ny faran'ny fifandraisana, no ahafahanao miala sasatra ao aminy ary mankafy azy fotsiny amin'ny fotoana.
2. Miresaka amin'ny namanao momba ny fahatsapanao.
Ny tsy fahampian'ny serasera na ny tsy fifandraisan-davitra matetika dia antony iray miteraka fanahiana eo amin'ny fifandraisana, koa tsara kokoa ny mazoto miresaka amin'ny vadinao.
Raha toa ianao ka mikasa ny hifankahita, dia alao izay hanery ny antsipiriany mivaingana toy ny hoe oviana ary aiza. Tsy midika izany fa mila mandray fanapahan-kevitra foana ianao (na dia te-hizara izany andraikitra izany aza ianao), fa kosa midika ho mpikarakara amin'ny fifandraisanao.
Mety hiteny ianao fa fanitarana fotsiny amin'ny fifehezana loatra izany, saingy tsia. Tsy ianao irery no mitondra ny zavatra kely rehetra, fa manome ny eritreritrao momba ny lalan'ny dia ianao.
Raha mifamatotra kokoa ny fifandraisanareo, saingy mbola manahy ny amin'ny ho aviny ianareo, miresaha amin'ny vadinao avy amin'ny toerana mahitsy sy misokatra.
Azavao ny zavatra tsapanao ary lazao azy ireo fa tsy izy ireo no mahatonga izany, fa ny zavatra niainanao taloha. Miezaha manome ohatra ny amin'ny toe-javatra izay hitanao fa sarotra sy ny fomba mety hahafahan'izy ireo mampihena ny tahotrao.
Raha matotra amin'ny fifandraisana izy ireo dia te hanao izay azony atao izy ireo hanomezana anao fiadanan-tsaina.
Ny fanehoana ny fihetseham-ponao dia mety hanampy azy ireo hihetsika bebe kokoa amin'ny fangoraham-po kokoa rehefa mahatonga anao hanao zavatra manelingelina azy ny fitaintainanao. Ho fantatr'izy ireo fa tsy voatery hidika izay lazainao (na ataonao) foana ianao ary afaka manampy anao handresy ny fahatsapanao izy ireo amin'ny tsy fampidirana solika amin'ny afo.
Ary ny fihetsika milaza amin'ny namanao momba ny fanahianao dia mety hahatsapa ho sitrana eo noho eo. Hahatsapa ianao fa nesorina ny lanja teo an-tsorokao, ary raha mamaly tsara sy am-pitiavana izy ireo dia hahatsapa fahatokisan-tena bebe kokoa ianao fa tsy handeha na aiza na aiza izy ireo.
3. Karakarao ny fahaleovantenanao.
Rehefa mifankatia ianao dia afaka mahatsapa fa tena hipetraka am-pifaliana ao am-paosin'ny vadinao raha mety azonao atao izany, fa ny fahaverezan'ny tenanao amin'ny fifandraisanao dia fomba azo antoka hampiakarana ny haavon'ny fitaintainanan'ny fifandraisana.
Raha manomboka mamaritra ny tenanao fotsiny ianao amin'ny resaka fifandraisanao dia apetrakao aminy ny fanerena be loatra mba hahomby amin'ny farany. Rehefa dinihina tokoa, iza moa ianao raha tianao misaraka ?
Hamarino tsara fa manao zavatra fotsiny ianao ho anao ary mitazona fiainana izay misaraka amin'ny vadinao. Miasà hitahiry ireo zavatra mampiavaka anao, ary angamba ianao no antony nahasarika anao ny vadinao voalohany.
Ny namanao dia tsy 'antsasaky ny fatra' anao ary tsy mahavita anao izy ireo. Efa feno sy tonga lafatra toa anao koa ianao. Ny fifandraisana dia mahafinaritra, saingy tsy ilaina amin'ny fahasambaranao izany.
4. Atsaharo ny tenanao amin'ny fandalinana ny hetsik'izy ireo rehetra.
Ny olona manao fanamarihana fanariana. Tsy mandinika ny teny rehetra lazainy izy ireo, na mamakafaka ny fomba mety handikana ny hafatra an-tsoratra rehetra izay ampitain'ny sainao mitebiteby. Ka tsy tokony avelanao hisy fiantraikany amin'ny toe-tsainao ny zavatra madinidinika.
5. Tadidio fa mifehy ny sainao ianao fa tsy mifehy anao.
Tsy mamindra fo amin'ny sainao ianao. Anananao ny fahefana hitarika azy, handrafitra azy ary hampiofana azy. Raha vantany vao tsapanao fa, mety mbola hiaina fanahiana ianao, saingy ho azonao ny mamantatra azy amin'ny zavatra misy azy ary mamela azy handalo, fa tsy mamela azy handany anao sy hitarika ny fitondran-tenanao.
Mbola tsy azonao antoka ny fomba hiatrehana ny fanahiana eo amin'ny fifandraisanareo?Raha afaka miasa amin'ity tenanao ity ianao, dia mety ho mora kokoa sy mahomby kokoa izany raha miresaka amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana izay afaka mitazona anao amin'ny lala-mahitsy ianao rehefa mianatra mifehy ny eritreritrao sy ny fahatsapanao.Ka maninona raha mifampiresaka an-tserasera amin'ny iray amin'ireo manam-pahaizana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra ny zavatra rehetra. Tsotra.
Ahoana ny fomba itokisana indray: mianatra mamela olona iray na eo aza ny ratram-po taloha
Rehefa mivadika ho firaiketam-po ara-pihetseham-po ny fitiavana
Famantarana 20 misy olona manana olana momba ny fandaozana (+ Ahoana no fomba handresena azy ireo)
fomba hanampiana olona manana olana amin'ny fandaozana
aiza no hisaraka amin'ny olona
inona no ho hita amin'ny lehilahy
wwe roman manjaka anarana tena izy
ahoana no ahalalanao fa misy olona manadala anao